Falanqaynta Fiidiyowga iyo Bixinta Lacagta ee MoneyWiz | Wararka IPhone
Fiidiyow-dib-u-eegis iyo bakhtiyaanasiibka barnaamijka MoneyWiz [UPDATED]
Louis ee Doonta | | Barnaamijyada IPhone
Marar badan waxaa nagu adkaata inaan xakameyno dhammaan lacagteenna oo aan si sax ah u ogaanno waxa aan ku bixinno. Sidaa darteed, maanta waxaan ka hadli doonnaa dalab cajiib ah oo naga caawin doona hay wadarta guud ee kharashyada maalin kasta si aan u ogaano halka ay lacagta ku baxeyso iyo inta ay le'egtahay inta aan heysano.
Codsigan waxaa la yiraahdaa Moneywiz, waana mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan ka heli karno fulinta nidaamka noocan ah. Iyada oo loo marayo darbiyada fudud waxaan awood u leenahay inaan ku helno tiro badan oo xulashooyin ah, una rogin barnaamijkaan mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran imisa ayaa ku jirta App Store.
Maalmihii yaraa ee aan isticmaalayay MoneyWiz, dareenka ay igu kalliftay aad bay u wanaagsan yihiin. Waan ku tala galay wax kasta oo ku lug leh dhaq-dhaqaaqa lacagta maalintayda oo sidaas ayaan ku awoodi karaa inaan ku jaleecdo aragtida lacagta aan ku leeyahay koontadayda ama gurigeyga oo lacag caddaan ah.
Markuu tixgeliyey inay tahay codsi mudan in la helo, laga bilaabo Wararka IPhone waxaan dooneynaa inaan ku siino fursad aad kuqabsato a gabi ahaanba waa bilaash, markaa waan usoconaa dhiib nuqul ka mid ah dhammaan akhristayaashayada.
Si aad uga qayb gasho bakhtiyaanasiibka MoneyWiz kaliya waa inaad raacdaa labadan tallaabo ee fudud:
share boostadan iyada oo loo marayo badhanka twitterka taas oo dusheeda ah.
Ka tag faallo ee boostadan
Isku aadka ayaa xirmi doona 00: 00 saacadood of this Sunday, the 24. XNUMX. Guuleystaha waxaa lagu dhawaaqi doonaa Isniinta oo dhan labadaba cusbooneysiin of this post sida loo marayo koontadayda shaqsiyadeed laga soo bilaabo Twitter
Nasiib wacan qof walba.
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin ka soo qeyb galkiina Waxaa ku guuleystey Josechal. La soco hadiyado badan oo sidan ah! 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Fiidiyow-dib-u-eegis iyo bakhtiyaanasiibka barnaamijka MoneyWiz [UPDATED]
Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay, gaar ahaan maareynta maaliyadeed ee saxda ah.
Ku jawaab Micke
Noocyada barnaamijyadan ayaa gebi ahaanba lagama maarmaan ah. Hayso haddii aan sidan jeclaado
Ku soo jawaab Tegueste
Codsigu wuxuu u muuqdaa mid aad u wanaagsan waana mid ka mid ah barnaamijyada lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedkeenna, waxaan rajeynayaa inaan fursad u helo inaan si bilaash ah ugu tijaabiyo. XD
Ku jawaab williamdelvalle
Waxaan isku dayay nooca bilaashka ah waana mid aad u wanaagsan, nasiib wacan dhamaantiin
Ku jawaab Joschal
Ayuub (@AbdihakimAinte) dijo
Waan ku khaldamay magaca, raali ahaw
Jawaab ku sii josechal (@josechal)
APP weyn !! Waxaan rajeynayaa inaan nasiib helo !!
Codsi xiiso leh. Nasiib wacan dhamaan kaqeybgalayaasha
Jawus ku jawaab
Waxaan taas ugu baahanahay kharashyadayda.
Ku jawaab kocx
Waxaan rajeynayaa inaan nasiib yeelan karo oo aan guuleysan karo !! Waligey waxba kuma guuleysan tanina waxay noqoneysaa fursad weyn, aad baad ugu mahadsantahay sidaad wax u siisay !! Salaan 🙂
PS: Waxaan rajeynayaa inaan nasiib yeelan doono, GUUL QOF KASTA!
Waxaan horeyba u isticmaali jiray App-ka qaabkan ah ilaa 2 sano waxayna aad ii caawisay si weyn inaan nolol maalmeedkeyga ku daboolo iyadoo la xakameynayo inta lacag ah ee aan qaatay iyo inta lacag ee ii hartay.
Waxa aan ka jeclahay codsigani waa sida fudud ee ay u egtahay, naqshaddiisa garaafka iyo suurtagalnimada maaraynta miisaaniyadda. Aan aragno haddii aan nasiib leeyahay!
Waxay umuuqataa mid aad ufiican, waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo !!!!!!!
Jawaab Jimmy iMac
Ayna Wanderer dijo
Waxaan kaqeybqaadaa @belenp on twitter
Ujawaab Ayna Globetrotter
Ariel saun dijo
Barnaamij aad u xiiso badan! Waxaan jeclaan lahaa inaan ku guuleysto
Jawaab Ariel Saun
Moneywiz waxay umuuqataa App-ka ugufiican ee laguhayo xisaabaadka guryaha. Waxay umuuqataa mid aad ufiican.
Ku jawaab elcondedooku
Amadeo Cejas dijo
Waxaan adeegsaday Quicken in mudo ah, sanado kahor, markii aan CD-ga kuhelay kombiyuutar kumbuyuutar oo cusub, waan joojiyay isticmaalkiisa maxaa yeelay ma ahan mid la qaadan karo. Waxaan jeclaan lahaa inaan helo codsigan mobilka ah.
Jawaab Amadeo Cejas
Juan José Simon Savall dijo
Maalin kasta waxay noqoneysaa mid lagama maarmaan u ah xakamaynta kharashyada. Codsiga noocan ah waa mid aad wax ku ool u ah awoodiisa.
Jawaab Juan José Simó Savall
Waan ku faraxsanahay in la iga xaday oo aan doonayo mid dib
Sida loo helo milkiilaha iphone lumay ama la xaday
Apple waxay fulineysaa xukunka waxayna "Sir" ka saartay Bakhaarka App ee Brazil